Imaamyo reer Xadramowt ah oo Imaaraadku u tababarayo Suufiyada si ay uga hortagaan Wahaabiyada - Horn Future
Imaamyo reer Xadramowt ah oo Imaaraadku u tababarayo Suufiyada si ay uga hortagaan Wahaabiyada
Cadan (Horn Future)-Waxa magaaladda Xadramowt ka dhoofay 240 isku gu jira imaamyo iyo wacdiyayaal Yemeni ah kuwaas oo gaadhay imaarada Abu Dhabi ee katirsan Imaaraadka Carabta.
Kooxdan ayaa waxa cashiro tababaro ah siin doona oo kormeeri doona wacdiyaha katirsan firqada Suufiyada ee lagu magacaabo Xabiib Cali Jafri sida ay daaha ka faydeen warar ay faafisay warbaahinta dalka Yemen,kaas oo laga soo xigtay bogga Twitter-ka ee “gobolka Hadramout”,.
Warkan ayaa waxa lagu sheegay kooxdan ay rumaysan in cashiradan ujeedadooda laga leeyahay ay tahay sidii looga hortaggi lahaa firqooyinka Salafiyadda iyo Wahaabiyada Sucuudiga ah.
Waxa boggan uu kasoo agaasimaha Awqaafta ee Xadramawt hadal uu yidhi oo uu ku sheegay in taliyihii hore ee magaaladda Axmed Ben Brik oo dhow qoyska maamula Imaaraadka Carabta.
in isagu codsaday in la “qaybiyo go’aamadii kasoo baxay shirkii lagu qabtay dalka Chechniya jejniya iyo in la qabto fadhiyo si loo adkeeyo bulshada dhexdeeda”,waxana uu sheegay in arrintani ay kamid tahay”waxa uu damacsan yahay isbahaysiga Carabta ee uu Sucuudigu hormoodka u yahay,”.
Ururka «Daaba» ee saldhigiisu yahay Abu Dhabi ee uu aasaasay wadaadka ku abtirsada firqada Suufiyada ee Xabiib Cali Jafri ayaa sheegay in ururkani uu lahaa abaabulka shirkan oo cinwaanka looga dhigay «Yaa ah Ahlu Sunna wal- Jamaaca ?».
Shirkan ayaa waxa uu ka qabsoomay dalka Chechniya sanadkii la soo dhaafay kaas oo dhaliyay maramo aad u weyn kadib markii firqooyinak ku abtirsada «Salafiyada» iyo «Wahaabiyada» iyo sido kale «Ikhwaanul Muslimiinka» uu ka saaray xayn-daabka «Ahlu Sunna wal- Jamaaca».
Culumada waa wayn ee ku abtirsada firqadaha Wahaabiyada iyo qaybo kamid ah Salafiyadda ayaa waxay dusha ka saaran yihiin oo taageeraan qoysaska maamula Gacanka Carabta ee hormoodka u yahay qoyska Sucuudiga oo iyaku u ku galgashay dunida Islaamka,waxana ay la dhigtay qalab lagu xalaalaysto xadgudubyada ay wadaan qoysaskani.
Dhinaca kale firqada ku abtirsada Suufiyada ayaa waxa ay noqotay iyada laftigeegu mid qoysaskan iyo kaligood-taliyaasha xooga ku haysta dunida Islaamka ay adeegsadaan si ay ugaga hortaggaan firqooyinka kale.
Qoysaskan ayaa waxay u adeegsadaan hantida faraha badan ee ay haystaan iyo culumadooda taageersan inay kula dagaalamaan bulshooyinka dalalka Islaamka ah ee isbadil doonka ah,sidii ka dhacday Masar shirqoolkii lagu afgamibiyay madaxwaynihii u horeeyay ee si dimuqraadiyad ah bulshada dalkaasi ay usoo doorato taariikhda dalka.
Waxa sido kale hantidan ay ku bixiyeen afgambigii guuldaraystay ee ka dhacay dalka Turkey marka lagu daro farogalinta qaawan ee ay ka wadaan dalalka kale ee Carbeed iyaka oo taageero siinaya ku dagaalka kula jira bulshada isbadil doonka ah sida Lybia iyo Yemen.
« Dib u milicso sida ay wax u dhaceen habeenkii afgambiga guul-daraystay uu ka dhacay Turkey	» UAE behind Qatar hacks: report